‘जेब्रा क्रस’मा जीवन, प्रेम र यौन
0 समीक्षकः राजबाबु श्रेष्ठ ‘सागर’
पछिल्लो समय प्राय स् सबै किसिमका लेखकहरु उपन्यासतिर ढल्केको पाइन्छ । कविता, कथा,निबन्ध, गीत जुनसुकै विधाका लेखकले पनि उपन्यासलाई माया गरेजस्तो देखिन्छ । त्यसो त उपन्यास धेरै पढिने विधा पनि भनिन्छ । कतिपयको नजरमा उपन्यास साहित्य जगतको नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने विधा हो भनेको पनि सुनिन्छ र सत्य हो पनि ।
किनकि, उपन्यासमा कथाभित्र सम्बाद, पटकथा, पात्र, घटना, परिस्थिति, समाजिक मूल्य र मान्यता, दुखसुख, संयोगात्मक, वियोगात्मक, गरिबी-अमिरी, न्याय-अन्यय, उत्पीडन र उन्मुक्तिका कथा र व्यथालाई आख्यानको सूत्रमा उनेर, बडो रूचीपूर्वक लेखकहरूले एक चलचित्रमा झैं पस्किएको हुन्छ र पाठकहरूले पनि चलचित्रकै पात्रझैँ सम्झी उपन्यासमा चलचित्रै हेरिरहेका हुन्छन् ।
एक कुशल लेखकले उपन्यासमा क्युरिसिटी म्याग्नेट क्रेट गरेको कारणले पनि पाठकमा अब के हुन्छ त, अब यसपछि के आउँछ त भन्ने एक छुट्टै किसिमको पाठकिय रस बनेको हुनाले पनि उपन्यास पाठकहरूको एक रुचीको विषय बन्नपुगेको हो । अझै भनुँ, उपन्यासलाई युरोपतिर एक नयाँ महाकाव्यको रूपमा पनि लिने गरिएको पाइएको छ ।
त्यसैले, अहिले बजारमा उपन्यासको माँग बढ्दो छ र हाल कविहरू पनि कवितालाई थन्याएर आख्यानकै जोड्तोडमा हारजितको बाजी खेलिरहेका देखिन्छन् ।
मैले लेखक सुबिन भट्टराइको उपन्यास्देखि लिएर मदन पुरस्कृत उपन्यासहरू मात्रै झन्डै तीन दर्जनजति अरू पनि थुप्रै आख्यान र गैर आख्यानहरू पढिसकेको छु । सबैमा आआफ्नै विषयवस्तु र समाजिक चित्रण रहेको पाइएको छ । कुनै पनि लेखकहरूले सम्भवत पाठकहरूकै हृदयभित्र गहिरो परेड खेल्न सकियोस् र कृतिले अपार सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने हेतुले नै जोड्तोड प्रयास गरी लेखिएको पाईँन्छ । केही राम्रा लेखकहरूले आख्यानमा अपार सफलता नाम र दाम दुबै कमाएको पनि यदाकदा सुन्नमा आएकै हो ।
हाम्रो प्रायजसो भेट् नभएता पनि तर आक्कल-झुक्कल भृकुटी मण्डपतिर चियापिउँदा भेट् हुने तर्कना शर्मालाई यो भन्दा पहिले म समाजका सीमान्तकृत वर्गलाई रचनामा विशेष स्थान दिन रुचाउने लेखिका र कविता, गीत र समालोचनमा कलम चलाउने एक प्रखर लेखिकाको रूपमा चिन्दै आएको थिएँ । तर आज आएर शर्माज्यूको पहिलो आख्यान उपन्यास जेब्र क्रसले शर्मालाई अब एक राम्रो आख्यानकारको लिस्टमा पनि स्थापित नाम राख्न सफल भएको पाइएको छ । जसको चर्चापरिचर्चा बजारमा निकै सुन्दै आएको छु ।
लेखिका शर्माज्यूले ‘जेब्रा क्रस’ उपन्यासमा नायीका ‘भावना’ को भावनाभित्र एक सपनाको राज कुमारको परिकल्पना रहेको दर्शाएको छ । जसमा जीवनको अर्थ जिउनु हो र प्रकृतिले दिएको भौतिक शरीरले भौतिक भोग गर्नुभनेको सृष्टी हुनुको सही अर्थ हो भनेर प्रष्ट्याइएको पाईँन्छ । र अर्को पाटो जिउनु भनेको प्रेमको उद्यानमा फूलभएर फक्रनु हो । यही जीवन जिउनुको अर्थमा जिउनलाई रहरभित्र प्रेम, माया र विपरित लिङ्गको जिजीविषा टुसाइरहने हुँदा, प्रेमको सिला खोज्दैजाँदा भेट् हुन्छ भावनालाई एक सपनाको राजकुमार पृन्सिपल ‘बिराज’।
अब उपन्यास जेब्र क्रसको असलीकथा बिराजको एन्ट्रीबाट एन्ट्री हुन्छ । जब बिराजले भावनालाई निकैनै इमोस्नल बनाएपछि सहमतिमा पच्चास रुपियाँको सिन्दूरले वैवाहिक जीवनको सूत्रमा बाँधिन्छ दुबैजना । तर अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने यो उपन्यासमा विवाहको पहिलो सुहागरातमै बिराज अलग्गिएर सुतेको देख्दा, कताकता भावनाको मनभित्र शंकाका असंख्य पालुवाहरू टुसाउन थाल्दछन् ।
भावना आफूलाई भावना हुनुको अर्थ खोज्नु थाल्छे । भावना आफूमा, भौतिक शरीरहुनुको अर्थ के त रु भावना आफूमा, भौतिक शरीरले भौतिक भोगनै गर्नु पाएन भने, जिउनुको असली माने के त रु भावना प्रकृतिले दिएको शरीरमा देखिने बिम्ब आँखाको दोखा हो या शरीरको खोलभित्र लुकेको अरूनै कुनै गहिरो समुद्री रहस्य रु आदिइत्यादी रहस्यको उद्यानमा जटिलताको प्रश्नहरू टिपेर समस्याको डालोमा थुपार्दै जान्छे । भावना सपनाको राजकुमारमा साक्षत बिराजै आफूले पाउँदा, कल्पनामा भौतिक शरीरको चरम् आनन्दमा चुर्लुम्म डुब्छे । जस्तोकि:- मेरा लजाएका गाजलु आँखाले उसको मदहोस मुहार नियाल्नेछन् । अचानक उसले मलाई जोगी लहराले पैँयुँको रूखलाई बेरेजस्तै अँगालोमा बेर्ने छ । अलिकति झुकेर भन्ने छ ‘त्यसरी न हेरन रानी । तिम्रा आँखामा आगोको लप्का छ । म जलेर भस्म हुनेछु ।’
उफ ! झुकेर उसले मेरो निधारमा चुम्ने छ । गाला, नाक, ओठ । उसका खिरिला औँलाहरूले अरू केके स्पर्श गर्ने छ कुन्नि ? उफ् ! मैले आफैलाई बिर्सिसकेकी हुनेछु त्यत्तिखेर सायद ! म होसमै रहदिँन होला, सायद । म पनि त्यसैगरी आफूलाई खोल्दै जानेछु, जसरी उसले खोल्न चाहाँन्छ मेरो यौवनको कसिला गाँठाहरू ! खै ऊ मेरो कुनकुन संवेदनिशील अङ्गको …!